दलान नेपाल : के सोच्छन काठमाडौ, के चाहन्छन मधेश ?
प्राध्यापक झाका अनुसार काठमाडौको बुझाईमा नेपालको आधा जनसंख्यामा रहेको मधेशीहरुको व्याकअपमा सवा अर्ब भारतीयहरु छन । जसले नेपाल भित्रको ५० प्रतिशत भन्दा वढी जनसंख्यामा रहेको मधेशीहरुको समस्यालाई वुझन मै अनेकन समस्याहरु सिर्जना गरी दिन्छन । उनी भन्छन, त्यस पछि काठमाडौको खासगरी सता केन्द्रित समुदायहरुको सोचमा पछिल्लो समयमा उत्पन्न भएको त्रास सवै भन्दा ठुलो समस्या छ । उनी भन्छन, काठमाडौ आफनो कुरामा सही छाप लगाउने मधेश अझै खोजीरहेका छन भने मधेशीहरु मधेशको कुरा सहित आफनो सही छाप लगाउन चाहीरहेका छन । काठमाडौ र मधेशको बुझाईमा देखिएको समस्याको जड यही निर भएको प्राधयापक झाको बुभाई छ ।
झाको बुझाईमा काठमाडौले कस्मेटिक अर्थात उनको गुनगान गाउने मधेशीहरुलाइ प्राथमिकतामा राख्न खोज्छन, जसले वास्तविक मधेशको सतहको लागी थप समस्याको रुपमा काम गर्छन ।
के चाहन्छन मधेश ?
अग्रेजीमा स्नोकोतर गरेका युवा अभियानी अनुज मिश्रा भन्छन, मधेशीहरुको लडाइ नै नेपालीपनको लडाइ हो । मधेशीहरु आफनो अस्तीत्व नेपालीपनमा खोजेका छन
जनकपुरको एक स्थानिय सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको समेत काम गरीरहेको अग्रेजीमा स्नोकोतर गरेका युवा अभियानी अनुज मिश्रा भन्छन, मधेशीहरुको लडाइ नै नेपालीपनको लडाइ हो । मधेशीहरु आफनो अस्तीत्व नेपालीपनमा खोजेका छन, मिश्रा भन्छन, तर काठमाडौ अहिले पनि मधेशीहरुलाइ आफनो अस्तीत्व वोकाउन खोज्छन ।
जनकपुरमा समाजिक अभियानको क्षेत्रमा काम गरीरहेका युवा रोशन कुमार झाको बुझाइमा मधेशीहरुको मुख्य लडाइ नै नेपालीपनको लागी हो । उनी भन्छन, विगत र जारी मधेश आन्दोलन मधेशीहरुले नेपाली वन्नका लागी गरीरहेका छन । उनको बुझाईमा काठमाडौको क्रिया जहिले पनि मधेशमा प्रतिक्रियाको रुपमा देखा पर्छन । उनी भन्छन, तपाइ हेर्नुस, काठमाडोमा मोदीको लागी क्षमापुजा गरिन्छ भने मधेशमा सुशिल कोईराला र ओलीको लागी क्षमा पुजा गरिन्छ, काठमाडौले भारतको झण्डा जलाउछ भने मधेशमा चिनको झण्डा जल्छन, त्यसैले काठमाडौको हरेक व्यहवारको प्रतिक्रिया मधेशमा उल्टो देखिनु ले समस्याको कारण पता बुझन गाहे छैन । उनी भन्छन, काठमाडौ जुन दिन मधेशीहरुलाई अपनत्व वोधका साथ व्यवहवार गर्न थाल्छन, त्यही दिन देखि मधेशीहरु पनि काठमाडौलाई आफनो वुझन थाल्छन ।
समाजिक अभियानको क्षेत्रमा काम गरीरहेका युवा रोशन कुमार झाको बुझाइमा मधेशीहरुको मुख्य लडाइ नै नेपालीपनको लागी हो । उनी भन्छन, विगत र जारी मधेश आन्दोलन मधेशीहरुले नेपाली वन्नका लागी गरीरहेका छन ।
जनकपुरका युवा संचार उद्योगी नीवन साहको बुझाईमा काठमाडौ र मधेशको विचमा देखिएको बुझाईको ग्याप केन्द्र स्तरमा मधेशीहरुको सहभागीता वढेपछि मात्रै कम हुन्छ । उनी भन्छन, काठमाडौ र मधेशको बुझाईको विचमा देखिएको अन्तरको मुख्य कारण समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन नहुनु हो । साह भन्छन, काठमाडौ समावेशीको कुरा मात्रै गर्नु र मधेशीहरु आफनो जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता खोज्नूको मुख्य कारण नै त्यही छ । उनका साह काठमाडौ समावेशीको नाममा एक दुई जनालाई राखेर आफनै हालीमुहाली गर्न खोज्छन जुन आजको मधेशी युवा पुस्ताले अव स्विकार गर्न तयार छैन ।
जनकपुर क्षेत्रमा जारी आन्द्योलनको क्रममा युवा मोर्चाको अग्रणीमा देखिएका राजीव रन्जन भन्छन, काठमाडौले मधेशीहरु संग समकक्ष आफु दाता भएको ठान्नु नै प्रमुख समस्या हो । उनी भन्छन, काठमाडौले दिए पछि मधेशले पाउने अवस्थाको अन्त भए मात्रै समस्याको अन्त हुन्छन । मधेशीहरुले खाजेको आफनो पहिचान र अधिकार त उसको हक भित्र पर्छ तर याहा त्यसका लागी पनि हामीले यत्रो आनन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था छ । विगतको देखि नै काठमाडौ सवै पक्षहरु संग सहमती गरेर अघि वढछू भनेर संविद्यान जारी गर्ने वेलामा देखाएको व्यहवारले काठमाडौ प्रति मधेशीहरुको विश्वास थप टुटेको उनको बुझाई छ ।
कतिपय विश्लेषहरु तथा जानकारहरुको बुझाईमा मधेशीहरुको नेपालमा संघर्षको मुख्य कारण नै उनीहरुको सम्पुर्ण रुपमा नेपाली बन्न नसक्नु नै हो । केहि बर्ष अगाडी मात्रै जेपी गुप्ताले लेखेको एउटा कितावमा भनिएकोृ छ, ने्पालमा मधेशीहरुको मुख्य लडाई भनेको उनीहरुले आफनो भेष, भुषा, सांस्कृति, पहिचान सहितको नेपाल बनोस भन्न चाहना राख्छन तर काठमाडौले नेपालमा चलीआएको सदियौ देखिएको एउटै समुदायको परम्परालाई मधेशीहरु अंगीकार गरोस भन्ने चाहना राख्छन ।
जनकपुर स्थित प्राध्यापक झा यसलाई यसरी पनि विश्लेषण गर्छन, अहिले नै अव हेर्नुस न, हामी काहा दशै आईरहेको छ, नेपालको सरकारी हरेक निकाय देखि याहाको सवै मिडियाहरुले दशैको वारेमा एकतर्फ साम्रगीहरु प्रसारण गर्छन । पहाडी समुदायले जसरी दशै मनाउछ, त्यही नै नेपालको दशै हो । तर उनीहरु के विर्सछन वा वुझ पचाउछन कि नेपालको भित्र रहेको आधा मधेशीहरु पुरै फरक तरीकाले दशै मनाउछन । यदी त्यसको वारेमा कभरेन पर्नु गर्यौ भने पनि पुरै संस्करण भित्र एउटा कुनै साम्रगी दिएर त्यो पुग्यो भन्ने ठान्छन । जसले सोचको प्रतिनिध्तिव गर्छन । तपाई एउटा आधा जनसंख्या भएको समुदायलाई पुरै कभरेज दिनुहुन्छ र अर्को समुदायलाई एउटा साम्रगीमा पुग्यो भन्ने ठान्नु हुन्छ । झाले मधेशीहरुको लडाईलाई यो प्रसंग संग पनि तुलना गर्छन । उनी भन्छन, काठमाडौले मधेशी भनेको एउटा सो पिसको रुपमा अहिले सम्म पनि देख्छन तर वास्तविकतामा हामी त याहा आधाको हिस्सेदार हौ । त्यसैले काठमाडौको यो सोच र मधेशीहरुमा आएको आफनो प्रति सचेतना विच तरातम्य नमिले सम्म सम्स्याहरु जहाको त्यही रहिरहने उनको वुझाई छ ।